Fayraska (human papilloma virus). Noocyada qaarkood HPV waxa uu sababaa burooyinka xubinta taranka, kansarka dhuunta afka makaanka (haweenka), kansarka futada ama xubinta taranka (raga iyo haweenka), ama kansarka afka ama hunguriga. Gudaha Netherlands, hablaha da'doodu tahay 12-13 waxaa loo bixiyaa bilaash (2 mudditaan) oo ku lid ah HPV. Tallaalka waxaa si fiican loo siiyaa ka hor inta aanay galmo ahaan firfircoonayn. Tani waxay ka ilaalin doontaa iyaga labba nooc oo khatar ah oo HPV taas oo sababta 70% xaaladood oo kansarka afka makaanka.
HPV waa cudurka galmadda lagu kala qaaddo (STI).